Kooxda Arsenal oo dalab ku kacaya 55 milyan oo lagu daray ciyaaryahan ka gudbisay Wilfried Zaha… (Miyaa laga aqbalay?) – Gool FM
Man City oo iska xaadirisay wareega siddeeda ee tartanka Champions League, kaddib markii ay ka adkaatay Real Madrid… +SAWIRRO
Kooxda Arsenal oo dalab ku kacaya 55 milyan oo lagu daray ciyaaryahan ka gudbisay Wilfried Zaha… (Miyaa laga aqbalay?)
Haaruun July 22, 2019
(London) 22 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Crystal Palace ayaa la soo warinayaa inay hoos u dhigtay oo ay iska diiday dalabkii ugu dambeeyey oo ay Arsenal ka soo gudbisay ciyaaryahankeeda Wilfried Zaha.
26-sano jirkaan ayaa si xoog leh loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqi doono Gunners todobaadyadii dhowaa ee ugu dambeeyey, halka Everton ay sidoo kale xiiseynayso saxiixa xiddigan xulka qaranka Ivory Coast.
Sida ay warinayso Jariiradda The Independent, Arsenal ayaa miiska u saartay Palace dalab ku kacaya 55 milyan oo gini oo lagu daray xiddiga 19-sano jirka ah ee Reiss Nelson oo amaah ku aadaya garoonka Selhurst Park xilli ciyaareedka 2019-20.
Yeelkeede, wararku waxa ay intaa ku darayaan in Palace ay soo diiday dalabkaas, una sheegtay kooxda Gunners inaysan ahayd wax ku filan si ay uga maarmaan Zaha, Eagles kooxda lagu naanayso ayaana diiday inay ciyaaryahankeedan ku bixiso wax yar 80 milyan oo gini.
Kooxda uu hoggaamiyo Macallin Roy Hodgson ayaa horay lacago wayn u heshay xagaagan kaddib markii ay ciyaaryahankoodii Aaron Wan-Bissaka ka iibisay Manchester United, sidaas darteed cadaadis badan kuma dareemayaan iibka Zaha.
Weeraryahankii hore ee Manchester United, kaasoo ka mid ahaa ciyaartooydii ka qeyb gashay xagaagan koobka qarammada qaaradda Afrika ee 2019 ayaa dhaliyey 10 gool, waxaana uu caawiyey 10 gool oo kale 34 kulan oo uu ciyaaray horyaalka Premier League intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ee 2018-19.
Kooxda Barcelona oo wadahadal heshiis kordhin ah la furaneysa Lionel Messi... (Meeqo sano ayay ka saxiixaneysaa?)